धुमधाम बिबाह गरेका श्रीमानको अर्कै प्रेमिका, बिबाह गरेको २ महिनामै फ’रा’र(भिडियो हेर्नुहोस्) – " कञ्चनजंगा News "
धुमधाम बिबाह गरेका श्रीमानको अर्कै प्रेमिका, बिबाह गरेको २ महिनामै फ’रा’र(भिडियो हेर्नुहोस्)
No Comments on धुमधाम बिबाह गरेका श्रीमानको अर्कै प्रेमिका, बिबाह गरेको २ महिनामै फ’रा’र(भिडियो हेर्नुहोस्)
सुनसरिको धराननिवासि कबिता प्याकुरेल नाम गरेको एक महिला जसको मोरङ्को बिराटचोक घर भएका शिशिर तिम्सिनासग बिबाह भएको थियो र बिबाह भएको दुई महिना पुग्दा नपुग्दै शिशिर भने सम्पर्कबिहिन भएका थिए । शिशिर कहाँ छन भनेर बुझ्दै जादा उनी अहिले बिदेशमा आफ्नो पुर्बप्रेमिकासग बस्दै आएको खबर बाहिरिएको छ । धुमधामका साथ भएको उनिहरुको बिबाहको २ महिना पुग्दानपुग्दै शिशिर भने यसरी बेपत्ता हुदा आज कबिता र उनकी आमा मिडियासम्म आइपुगेका छ्न ।
कबिताको आमाको भान्जिको काकाससुराबाट आएको रहेछ कबिताको लागि बिहे गर्ने प्रस्ताव । उनले शिशिरको परिवार पनि ठिक भएको र केटो पनि राम्रै रहेको भन्दै बिबाहको प्रस्ताब ल्याएपछी उनिहरुको बिबाहको कुरो अगाडि बढेको रहेछ । केटा पक्ष र केटि पक्ष दुबैको परिवारको आपसी समझ्दारिमा भएको रहेछ बिबाह । कबिताकी आमाले भने बिबाह हुनुपुर्व नै कविता र शिशिरलाइ एकैठाउमा राखेर अरु कोहि छ छैन भनेर सोधपुछ पनि गरेकि रहिछिन । छोरी मान्छेको जिन्दगि हो एकचोटि भन्दा दुइचोटि बिबाह हुदैन अरु कोहि छ भने अहिले नै भन्नू भनेर सम्झाएका पनि रहिछिन आमाले ।
शिशिरले त्यस्तो केही नरहेको भनेपछी दुबैपक्षको सहमतिमा भएको रहेछ बिबाह । कबिताले यस्तो घटना हुन्छ भनेर सोच्दा पनि नसोचेको बताउछिन, आफुलाइ बिबाह गर्छु भन्दै माग्न आउने केटाप्रती पुर्ण बिश्वास भएको बताउछिन उनी । त्यति खुलेर कुरा भने गर्दा रहेछ्न शिशिर । धुमधामका साथ भएको थियो उनिहरुको बिबाह । श्रीमानप्रती शं’का भने पहिले नै रहेछ कबितालाइ तर टिकटकमा जब उनले शिशिरको फोटो अरु कुनै महिलासग देखिन त्यसपछी भने उनलाइ बिश्वास भएको कुरा उनले बताइन । उनले राखेको बिन्जु भट्टराई तिम्सिना नामले त झन उनलाइ थप शंका बढाइदियो ।
दुबइमा शिशिरसगै काम गर्ने एक महिलाले शिशिरबारे जानकारी दिने हिसाबले फोनकलमार्फत मिडियासग जोडिएकी छिन । बिन्जु र शिशिरसगै एकैठाउमा काम गरेको बताउने उनि कबिताको भिडियो हेरेर छक्क परेको र नराम्रो लागेकोले केही कुरा शेयर गर्न मन लागेकोले मिडिया फोन मार्फत जोडिएकी छिन । शिशिर र बिन्जु सगै बस्दै आएको कुरा पनि उनले बताइन तर आफ्नो नाम नखुलाइदिनु भनेर अनुरोध पनि गरिन ।
बिन्जुलाई आफ्नो श्रीमती बताउने शिशिरले एक छोरा रहेको कुरा पनि बताएका रहेछ्न । यता एउटा नारिको जिन्दगी बर्बाद गरेर उनि भने बिदेशमा मोज गरिरहेका छ्न, सुन्दा पनि बिश्वास नै नहुने, आखिर यस्तै गर्नुथियो भने किन गरे बिबाह । थर पनि गलत बताएका रहेछ्न उनले । आमाछोरिको भने भयो यता रु’वा’बा’सी ।
कठै बरा कबिताको बिबाह गर्दाको सात लाख रुपैया ऋण रहेछ । केही राम्रो हुन्छ छोरिको जिन्दगी सुध्रीन्छ होला भनेर ऋण काडीकाडी बिबाह गर्दिन आमाचाहीले तर आज न छोरिको जिन्दगी सुध्रीयो न त आफ्नो नै । कठै कस्तो बि’ड’म्ब’ना, ला’चा’र छ्न उनिहरु । के गर्नु न के गर्नु । कबिताले भने शिशिरको परिवारलाई थाहा भै भै यो सब गरेर हामिलाइ फसाएको हो भन्दै रु’न्छिन । छोरो सुध्रिन्छ कि भनेर हामिलाइ फसाएको हो भन्दै गुनासो गरिन उनले
← मेरा श्रीमानले नै मेरो प्राइभेट तस्विर खिचेर अरुलाई पठाएर भन्ने गर्थे.. → सुत्दा किन ब्रा खोलेर सुत्ने ? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने